Ukuphatha ama-CTA noma izikhangiso nge-WordPress | Martech Zone
Ukuphatha ama-CTA noma izikhangiso nge-WordPress
NgoMsombuluko, Disemba 30, 2013 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 1, i-2017 Douglas Karr
Sisebenzisa inhlanganisela yokuthengwa kwezikhangiso kusayithi lethu - kufaka phakathi izingcingo zokubizela ezenzweni ezithuthukisa izinsizakalo zethu, izikhangiso ezihambisanayo zezinkampani esizithembayo, kanye nezikhangiso ezixhasiwe nezinkampani esikhethe ukusebenzisana nazo. Ukuhlanganiswa okuhlukile kwamaphakeji kuyinkimbinkimbi impela, ngakho-ke sihlanganise izindawo zesikhangiso kwingqikimba yethu ukuphatha izikhangiso zokubonisa.
Kuhlanganiswe ne Inketho yokubonakala kaJetpack ngamawijethi, ukubeka amakholi asebenzayo afanele futhi anamandla noma izikhangiso kulula kakhulu ukukufeza nge-WordPress namuhla. Isayithi lakho le-WordPress kungenzeka linganikeli ngokukhangisa kwangaphandle noma lifune izinketho esizenzayo. Eqinisweni, ungahle ufune ukuphatha ama-CTA akho. I-AdPress iyi-plugin ye-WordPress yakhelwe ngqo lokhu.
I-AdPress iyi-plug-in ye-premium yokuphatha izikhangiso. Yipulatifomu enamandla futhi efakwe ngokuphelele yokuthengisa nokubonisa izikhangiso zebhulogi lakho le-WordPress:
Ukusetha Okulula - Dala umkhankaso wakho ngokuchofoza okumbalwa nge-AdPress Ad Designer. Cacisa ukuthi isikhangiso sakho sizobonisa kanjani, isikhangiso sokubizelwa esenzweni, inkontileka yokuthengisa… Ukuhlanganisa i-Ad Zone yakho kubhulogi yakho kulula. I-AdPress inewijethi, i-shortcode nokusekelwa komsebenzi.
Ukuthengisa Okuzenzakalelayo - Abasebenzisi babhalisa futhi bathenge ama-Ad Spots kudeshibhodi yephrofayili yabo. Inkokhelo iphathwa ngokuzenzekelayo nge-PayPal. Lapho umsebenzisi ethenga, waziswa kudeshibhodi yakho, futhi ungamukela noma unqabe isikhangiso sakhe. Ukubuyiselwa kwemali kwe-PayPal nakho kuyasekelwa.
Izibalo zesikhangiso - Izibalo zesikhangiso ziyafinyeleleka kubo bobabili umlawuli neklayenti abathenge isikhangiso. I-AdPress inikezela ngezibalo ezinemininingwane nge-CTR, Izilinganiso kanye neshadi elihle.
Umlando, Ukungenisa / Ukuthekelisa, Ukwenza Ngokwezifiso - I-AdPress iqopha umlando wokuthengwa kwesikhangiso ngasinye. Ibuye inesici esinamandla sokungenisa nokuthekelisa esenza isipele konke noma ingxenye yedatha yakho kufayela elenza isipele. Izikhangiso ze-AdPress zingenziwa ngezifiso ngokuphelele. Ikhodi ekhiqizwayo ye-HTML ne-CSS yezikhangiso ingashintshwa ukusuka kuphaneli yezilungiselelo.
Usizo Nokusekela - I-AdPress iza nefayela losizo elinemininingwane eminingi. Banikeza nokusekelwa okusheshayo (iforamu + ama-imeyili). Lindela impendulo kungakapheli usuku noma ezimbili.
Sebenzisa isixhumanisi sethu sokuxhumana futhi ungakwazi landa i-AdPress yesayithi lakho ngo- $ 35 nje. I-plugin inezilinganiso eziphezulu nokuthengwa okucishe kube yinkulungwane kuze kube manje.
Tags: umphathi wesikhangisoi-adressumphathi womkhankasoumphathi wesikhangiso se-wordpressumphathi womkhankaso we-wordpressplugin wordpress
I-Salesforce: Unyaka Wakho Ozenzakalelayo ku-Review Infographic